E-Journal: January 2010
မိဘကသဘောတူတဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်မှာလား??? တဲ့...
ကျွန်မက ကိုယ်ကချစ်ပြီး မိဘကပါသဘောတူတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ချင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်...
ငယ်ရွယ်တဲ့အသက်အရွယ်မှာတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲ လက်ထပ်ချင်ကြတယ်...
ငယ်ရွယ်တဲ့အသက်အရွယ်မှာတော့ နှလုံးသားအလိုဆန္ဒကိုပဲ ဦးစားပေးကြတာများပါတယ်...
မိဘသဘောတူတူ မတူတူ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ပဲ လက်ထပ်ဖြစ်ကြတာများမယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်...
အသက်အရွယ်ရလာတော့ နှလုံးသားခံစားချက် ၊ ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်လာနိုင်ကြပြီး ဦးဏှောက်နဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လာတာများလာတယ်...
လက်ထပ်တယ်ဆိုတာက သီးခြားစီဖြစ်နေတဲ့ ဘဝနှစ်ခုကို တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ်လိုက်တာပါပဲ....
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်နေတဲ့ ဘဝတစ်ခုမှာတောင် လိုအပ်ချက်တွေ အလိုဆန္ဒတွေများနေကြတယ်...
ဘဝနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ လိုအပ်ချက်... ဆန္ဒတွေကပိုပိုများလာမယ်...
လူတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်မိပြီဆိုရင်လည်း သူ့ ရဲ့ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးနှစ်ခုစလုံးကို ခံစားကြရတာပါပဲ...
ချစ်သောမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့ ဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေ အပြစ်မမြင် အပြစ်မတင်ရက်ပေမဲ့…
မချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတော့ အသေးအမွားကိစ္စလေးတွေမှာခွင့်လွတ်နိုင်ပေမဲ့ ကိစ္စကြီးတွေမှာတော့ ခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး…
လက်ထပ်ပြီးတဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်မကိုပြောဖူးပါတယ်…
လူနှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီးရင် ချစ်တာထက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မေတ္တာထားနိုင်ဖို့ရယ် နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ရယ် အရေးကြီးပါတယ်တဲ့…
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို လက်ထပ်သည်ဖြစ်စေ… မိဘသဘောတူတဲ့သူကိုလက်ထပ်သည်ဖြစ်စေ သူ့ရဲ့စိတ်ထား … သူလုပ်ကိုင်တာတွေ… သူ့အပြုအမူတွေကို ကိုယ်ကနားလည်ပေးနိုင်တယ်… ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်း သူကနားလည်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် နှစ်ယောက်
ရှေ့ ဆက်ရမဲ့ ဘဝတစ်ခုက အဆင်ပြေမှာပါ…
ခက်တာကလည်း “နားလည်ပေးပါတယ်” ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းက ပြောရတာသာလွယ်တာပါ… တကယ်နားလည်ပေးရတော့ခက်ပါတယ် ….
ကျွန်မသူငယ်ချင်းပြောသလိုပါပဲ ကိုယ်ကနားလည်ပေးထားတာကိုလည်း သူကအသိအမှတ်ပြုပြီး ကိုယ့်စေတနာကိုနားလည်ဦးမှတဲ့…. ကိုယ်ကနားလည်ပေးလိုက် သူကလုပ်ချင်တာတွေလုပ်လိုက်နဲ့ဆို နားလည်ပေးတဲ့သူအတွက် အခက်ကြုံနိုင်ပါတယ်…
လူ့သဘောသဘာဝအရတော့ သည်းခံခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာကလည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်…
ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ မိဘကသဘောတူသူ၊ ကိုကလည်း မေတ္တာထားနိုင်တဲ့သူ…
အားလုံးလည်း အခြေခိုင်မာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးများ ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်၊ တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို့ . . . .
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက မယ် at 11:23 AM3comments
“တစ်ဂူထဲမှာ ခြင်္သေ့နှစ်ကောင် မအောင်းဘူး - တဲ့
ဒါပေမယ့် အစ်မကတော့ ဘယ်တုန်းကမှ မလစ်လပ်ခဲ့သူ။
မာစတာတန်းကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ စာကူရှင်းဖို့ တောင်းဆိုသူ။
ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင် သူ့မောင်
သူ့ကျောင်းနေသက်ကို သိုးမွေးချည်တွေ၊ တက်တင်းချည်တွေနဲ့ ဆက်ခဲ့သူ။
သူဟာ ငါတို့အိမ်ရဲ့ထောင်မှာကျနေတဲ့ အိမ်ထောင်မရှိသူ အပျိုစင်
သူဟာ ငါတို့ရဲ့ မာသာထရီဇာ
သူ့ကိုယ်သူမှတစ်ပါး တစ်မိသားစုလုံးအား ပူပန်သူ။
မိုးခါးရေထက်ခါးတဲ့ အမှန်တရားနဲ့ ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်မှားနေသူ။
အလှတရားကို သနပ်ခါးထက် ပိုမသိသူ။
စိန်ဥမုန့်ဟင်းခါးပင် မသိသော်ငြား အမေ့ပါးကို ပြောင်စေသူ။
ထို သူ (သို့) သူမ….
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 1:10 PM4comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 2:33 AM2comments
(မနက်ခင်းမိုးအလင်း အိပ်ရာကထထချင်းတွေမှာ ဘာသာစကားတူသူ မိတ်ဆွေတစ်ချို့ထံ ပို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ SMS လေးတွေပါ။ အဲဒါလေးတွေကို နံနက်ခင်းကဗျာများ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ SMSကဗျာအဖြစ် ဝေမျှခြင်း (တစ်နည်း) သိမ်းထားခြင်းမျှသာဖြစ်ပါတယ်။)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 9:44 PM 1 comments
စိတ်သစ်လူသစ် ဖြစ်ပါစေ ...
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 8:41 AM3comments